यी हुन् मोबाइल नबोक्ने “भिआइपी” – Himal Post | Online News Revolution
नेकपाका नेता किन जान्छन कांग्रेसको क्यान्टिनमा ?
प्रधानमन्त्रीकै धारोमा पानीको बिजोग !
त्रिविको बिजोग: ट्रान्सक्रिप्ट लगेको एक वर्षपछि फेल !
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ब्यापक आर्थिक अनियमितता
देशका सबैजसो विमानस्थल घाटामा, के गर्छ प्राधिकरण ?
यी हुन् मोबाइल नबोक्ने “भिआइपी”
himal post २०७५, १५ बैशाख ०७:४७ April 28, 2018
एक्काइसौँ शताब्दीमा मानिस प्रविधिविनाको जिन्दगीको कल्पना पनि गर्न सक्दैनन् । नयाँ प्रविधिसँग मानिस आफूलाई व्यस्त बनाउन चाहन्छन् । कम्प्युटर, मोबाइल, ट्याबलगायतका प्रविधिले मानिसलाई यति धेरै सुविधा दिलाइदिएको छ कि जतिवेला पनि ऊ त्यसमै रमाइरहेको छ । प्रविधिको सबैभन्दा सजिलो उत्पादन मोबाइल त अहिले मानिसको दैनिक जीवन नै भइसकेको छ । मानिस हरपल मोबाइलमा गफिइरहेको हुन्छ, म्यासेन्जरको च्याटिङमा व्यस्त भइरहेको हुन्छ । आजको नयाँ पत्रिकामा छापिएको छ ।
कतिपय अवस्थामा देउवाले श्रीमती आरजु राणा देउवाको मोबाइलबाट पनि कुराकानी गर्दै आएका छन् । देउवाको आफ्नै मोबाइल भने नरहेको उनका स्वकीय सचिव भानु देउवा बताउँछन् । ‘सभापतिले मेरो मोबाइलमा कुराकानी गर्नहुन्छ, त्यसबाहेक मोबाइल खेलाउने वा अन्य केही गतिविधि गर्नुहुुन्न,’ भानुले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमात्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति र पूर्वराजदूत पनि हुन् । जापानका लागि नेपाली राजदूत माथेमा मोबाइलविना पनि निरन्तर सक्रिय छन् । त्रिविको उपकुलपति र राजदूतको जिम्मेवारीमा रहँदा पनि उनले मोबाइल बोकेनन् । माथेमाले प्रविधि विकासको असन्तुष्टिले मोबाइल नबोकेका भने होइनन् । अधिकांश मानिस फेसबुक, ट्विटर, भाइबरलगायतका सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय हुन्छन् । केही मानिस भने यी सबै चिजबाट टाढा हुन्छन् । शिक्षाविद् माथेमा इन्टरनेटबाट टाढा छैनन्, तर मोबाइल भने बोक्दैनन् । माथेमासँगको सम्पर्क माध्यम भनेको इमेल वा घरको ल्यान्डलाइन टेलिफोन हो । ‘जापानको राजदूत हुँदा मोेबाइल बोकिनँ, अहिले त झन् के बोक्नु भन्ने लाग्छ,’ माथेमाले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘छोरीले एउटा मोबाइल किनिदिएकी छिन्, तर चलाउने गरेको छैन ।’
माथेमालाई कार्यक्रममा जाँदा मोबाइलमा फेसबुक, ट्विटर चलाएर बसेको रुचिकर लाग्दैन । मोबाइलमा रमाउने मानिस सामाजिकीकरण कम हुने उनको तर्क छ । त्यस्तो प्रवृत्तिले पश्चिमा देशका किशोरकिशोरीमा समस्या सिर्जना गरेको उनको भनाइ छ । ‘मोबाइल नहुँदा फेसबुक र ट्विटर पनि चलाउँदिनँ, यसले मलाई समय बचत गराएको छ, त्यो समयमा अध्ययन गर्छु,’ माथेमाले भने ।
मोबाइल नहुँदा समस्या नभोगेका भने होइनन् पहाडीले । विदेश भ्रमणमा जाँदा त समस्याका भुक्तभोगी हुन् उनी । तैपनि मोबाइल प्रयोगमा भने उनको रुचि देखिन्न । मोबाइल नबोकेकै कारण भारत जाँदा रेल र प्लेनको टिकट किन्दा समस्या व्यहोरेको पहाडीले अनुभव सुनाए । ‘मोबाइल नबोक्दा भारतमा असामाजिक नै ठानेका थिए,’ पहाडीले भने, ‘फोन गर्नैपर्ने बाध्यता भएर वनारसमा फोन खोज्दा पिसिओ नै बन्द रहेकाले समस्या भोगेको थिएँ ।’
होटेलको बुकिङदेखि कार्यक्रमको तालिका मिलाउनसम्म मोबाइल आवश्यक हुन्छ । ‘खासमा मोबाइल नबोक्नु भनेको आफैँले आफैँलाई दुःख दिनु हो,’ पहाडीले भने । नेपालमा भने खासै समस्या नपरेको उनी बताउँछन् । इमेलका साथै अफिस र घरको फोनले कार्यक्रमको तालिका तय हुने उनले बताए । ‘प्रविधिको विरोधमा मोबाइल नबोकेको भने होइन, अहिले प्रविधिको प्रयोगमा पछाडि पर्नु भनेको निरक्षर हो, त्यही निरक्षरभित्र पर्छु,’ पहाडीले भने, ‘मोबाइलको सिर्जनशील उपयोग गर्नुपर्छ ताकि मानिसलाई मानसिक दिग्दारी नहोस् ।’
बैठक वा छलफलमा बस्दा पनि मानिसले किचिकिचि मोबाइल प्रयोग गरेको उनलाई मन पर्दैन । उनी कान कम सुन्छन् । यी दुई कारणले पनि आफूलाई मोबाइल बोक्न मन नलागेको उनले बताए । ‘केही वर्षअघि एउटा संस्थाको परामर्शदाता भएर काम गर्दा त्यही संस्थाले सम्पर्क गर्न गाह्रो भयो भन्दै मोबाइल दिएको थियो, तीन–चार महिना बोके पनि प्रयोग गरिनँ,’ श्रेष्ठले भने । उनलाई सम्पर्क गर्ने माध्यम इमेल र घरको ल्यान्डलाइन फोन हो । ‘मलाई आवश्यक पर्ने व्यक्तिलाई घरको फोनबाट कुरा गरिहाल्छु, खोज्नेहरूले पनि घरको फोन वा इमेल गर्छन्, त्यस्तो कुनै समस्या छैन,’ श्रेष्ठले भने ।
मोबाइल बोकौँजस्तो खासै नलागेको जोशी बताउँछन् । घरको ल्यान्डलाइन फोनमा उनी कुराकानी गर्छन् र कार्यक्रमको समय निर्धारण गर्छन् । त्यसैअनुसार उनी सकभर पैदलै हिँड्छन् । जोशी मोबाइल नबोक्ने मात्र होइन, सार्वजनिक यातायात चढ्न पनि रुचि राख्दैनन् । ललितपुरको मंगलबजार क्षेत्रमा बस्ने जोशी पहिले पहिले काठमाडौंसम्मको यात्रा पैदल नै गर्थे । केही समयअघि मात्र ललितपुर महानगरपालिकाले सम्मानस्वरूप जोशीलाई गाडी सुविधा दिएको छ ।
के गर्दै छन भारतका ३ पूर्वराजदूत १८ दिनदेखि काठमाडौंमा ?